Tena Steroids Trenbolone Enanthate Powder ho an'ny Gym Fitness Bodybuilding parabolan miaraka amin'ny EU Domestic Shipping
Anaran'ny vokatra:Trenbolone Enanthate
Anarana hafa:Tren Enan
Fisehoana:Vovoka mavo mavo na mavo maizina
Fitsapana teboka mitsonika:mahay
Hazavana avo:trenbolone enanthate vovoka, fanampin'ny bodybuilding tren
ZAVATRA FITADY famaritana VOKATRA
Description Vovoka kristaly mavo mavo na saika fotsy Vovoka mavo maivana
Famantarana IR tsara
sahy miteny 97.0~103.0% 99,37%
Teboka fandrehitra 70~80°C 70.5–76.5°C
Fihodinana manokana +22~+26° +23.09°
Fatiantoka amin'ny fanamainana 0,5% max 0,25%
Ny sisa amin'ny ignition 0,1% max 0,05%
Metaly mavesatra 20PPm max <20PPm
Fahalotoana mivadibadika organika mahafeno ny fepetra takiana. mifanaraka
Zavatra mifandraika Fahalotoana tokana: 1.0% max <1,0%
loto Fahalotoana tanteraka: 2.0% max <2.0%
Famaranana Ny fepetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny orinasa.
Trenbolone Enanthate dia tena isan-karazany amin'ny lafiny ny fahaiza-manao ny fampiasana.Azo ampiasaina ara-bakiteny ho an'ny tanjona rehetra izy io: miboiboika, mahazo matavy be, manapaka (fatiantoka matavy), mahazo hery, ary tanjona hafa mety ho an'ny fanatanjahan-tena samihafa.Eo imason'ny maro, ny hormonina Trenbolone dia heverina ho ny farany amin'ny fanapahana tsingerina;Tsy mahagaga izany noho ny fitomboan'ny metabolika matanjaka sy ny fananana fandoroana tavy.Na dia tombontsoa lehibe aza ireo, izay tena mamirapiratra tokoa ny Trenbolone Enanthate dia ny fahafahany mitahiry betsaka ny hozatra mahia;angamba tsara kokoa noho ny steroid anabolika eto an-tany.
Trenbolone enanthate dia steroid ampiasain'ny veterinariana amin'ny biby fiompy mba hampitomboana ny fitomboan'ny hozatra sy ny fahazotoan-komana.Ny fitambarana Trenbolone dia manana fifandraisana mifamatotra amin'ny mpandray androgen avo dimy heny noho ny an'ny testosterone.
Ny antsasaky ny fiainana lava kokoa noho ny Trenbolone Acetate
Trenbolone Enanthate dia matetika ampiasaina amin'ny tsingerina lava kokoa noho ny antsasaky ny androm-piainany sy ny hetsika miadana kokoa ao amin'ny vatana.
Noho ny ela Enanthate ester, mpampiasa dia mahazatra tsindrona Trenbolone Enanthate eo ho eo indroa isan-kerinandro, miaraka amin'ny fitantanana tsirairay misaraka mitovy.Ohatra, ny tsindrona ny alahady sy ny tsindrona ny alarobia dia ampy.Raha misy olona mampiasa 400mg / herinandro amin'ny Trenbolone Enanthate, 200mg dia tsindrona amin'ny alahady ary ny 200mg manaraka dia ampidirina amin'ny alarobia.
Tokony hazava tsara anefa fa ny estera mipetaka amin'ny hormone (Acetate, Enanthate, na Hex) dia manova fotsiny ny tahan'ny famotsorana sy ny antsasaky ny androm-piainan'ny zava-mahadomelina - tsy manova ny tanjaka, ny hery, na ny pharmacodynamics. ny hormonina izay apetaka amin'ny ester.Ny Trenbolone Acetate dia maneho ny antsasaky ny andro 3, ny Trenbolone Enanthate dia maneho ny antsasaky ny andro 7 - 10 andro, ary ny Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) dia maneho ny antsasaky ny andro 14.
Ny fomba famadihana vovoka Parabolan ho tsindrona menaka
Recipe 100mg/ml mahazatra ho an'ny 100ml
10 grama Trenbolone Ethanate vovoka (7.5ml)
1, kalitao avo lenta amin'ny vidiny mifaninana:
1) Fenitra: USP Standard
2) Fahadiovana rehetra≥99%
3) Mpanamboatra izahay ary afaka manome vokatra avo lenta amin'ny vidin'ny orinasa.
2, Fandefasana haingana sy azo antoka
1) Ny entana dia azo alefa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fandoavana.Misy laharana fanaraha-maso
2) fandefasana azo antoka sy malina.Fomba fitaterana isan-karazany ho an'ny safidinao.
3) tahan'ny fandalovan'ny fomba amam-panao ≥99%
4) Manana masoivoho / remailer / mpaninjara manokana izahay izay afaka manampy anay handefa ny vokatray haingana sy azo antoka, ary manana tahiry ao izahay hamindrana.
3, Manana mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay.
1) Ny serivisy matihanina sy ny traikefa manankarena dia mahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho tony, ny tahiry ampy ary ny fandefasana haingana dia mahafeno ny faniriany.
2) Ny valin-tenin'ny tsena sy ny valin'ny entana dia ho ankasitrahana, ny mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa dia andraikitsika.
3) Ny kalitao avo lenta, ny vidiny mifaninana, ny fandefasana haingana, ny serivisy kilasy voalohany dia mahazo fahatokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifa.
Fizotry ny baiko
Azafady mba lazao mazava hoe inona ny vokatra sy ny habetsahanao ilainao
Ny vidin'ny vidiny sy ny antsipiriany dia hatolotra anao hodinihina sy hanamarina
Bank Transfer, Western Union, Money Gram ary Bitcoin
Express Modes rehetra (EMS, DHL, TNT, FedEx, UPS, sns)
Omeo ny mombamomba ny adiresinao Valiny sy marina (raha azo atao miaraka amin'ny kaody paositra, laharan-telefaona).
Mifidiana fomba tsara indrindra araka ny habetsahana sy ny fiarovana (Super discreet, matihanina ary za-draharaha)
Ao anatin'ny 8 ora rehefa voaray ny fandoavana
Sarin'ny fonosana no hatolotra hanavahana ireo entana
Atolotra rehefa mivoaka
3-7 andro fiasana (Door-to-Door)
24/7 an-tserasera raha misy olana
Q1: Afaka mahazo santionany ve aho?
A: Azo antoka, manolotra santionany maimaim-poana izahay, mila mandoa ny vidin'ny fandefasana ianao.
Q2: Ahoana no hanaovana baiko?
A: Azafady alefaso aminay ny fanontaniana, dia hanao ny tolotra izahay.Fandoavana amin'ny alàlan'ny Western Union, Moneygram, Kaonty Banky ary Bitcoin.Dia handamina ny fandefasana izahay.Aorian'ny fanaterana dia hanolotra Tracking No..
Q3: Misy antoka 100% ve ny fandefasana?
A: Eny, manolotra antoka fandefasana 100% izahay.Raha misy parcel voasambotra dia alefanay indray.
Q4: Ahoana ny fandefasana?
A: Ny entana dia halefa ao anatin'ny 3 andro fiasana aorian'ny fandoavana.Matetika izahay dia mampiasa EMS, ePacket, Fedex, DHL, TNT ary USA Domestic fandefasana entana sy ny sisa.
Q5: Misy fihenam-bidy ve?
A: Eny.Azo ifampiraharahana ny vidiny.Alefaso aminay fotsiny ny entana ilainao sy ny habetsahana.Hampihatra ny vidiny tsara indrindra izahay ary manolotra fihenam-bidy ho anao.
Q6: Inona ny habetsahan'ny baiko farany ambany indrindra?
A: Matetika ny MOQ dia 100g.Fa miankina amin'ny zavatra sy ny fepetra takiana ihany koa dia afaka manao 10g, 20g, 30g na 50g.
teo aloha: Trenbolone Enanthate Cutting Cycle Steroid Parabolan Tren E Powder CasNO.472-61-5
Manaraka: Tren E High 99% Assay Pharmaceutical Chemical Trenbolone Enanthate Raw Steroid Powder miaraka amin'ny fandefasana azo antoka 100%
Tren E Powder
Tren Enanthate Powder
Drostanolone Enanthate Powder 99.1% Masternon ...
Trenbolone Enanthate manapaka tsingerina Steroid Par...
Tbe Tren E Vovoka fitomboan'ny hozatra USA UK Domestic...
Tena Steroid Trenbolone Enanthate Powder ho an'ny G ...